Inona no andinin-Teny Sinoa Ankizivavy Ianao Mampiaraka Aziatika Fitiavana Toerana
Noho izany, ianao vao nahita Filipinas ary dia variana amin’ny roa, ny kolontsaina ary ny hery anaty. Mety efa tonga saina fa ny hafatra no tena zava-dehibe ianao rehefa mifampiraharaha amin’ny ny vehivavy, fa ry zareo zava-dehibe indrindra rehefa miezaka ianao mba woo ny vehivavy Sinoa. Toy ny vehivavy ao indrindra mandroso sy an-dalam-pandrosoana, vehivavy Shinoa miraikitra eo amin’ny finday be dia be ny fotoana, ary ny anankiray ny ny tsara indrindra filokana ho an’ny mahazo azy ny saina raha vao manana ny maro dia ny hitifitra azy ny lahatsoratra. Tsy izany, azonao atao ihany koa ny mampiasa ny iray amin’ireo maro media sosialy Shinoa sy ny fampiharana fandefasan-kafatra mba hahafantatra ny vaovao vehivavy ianao raha ao Shina. Ny olona any China ny fitiavana ny mampiasa ny WeChat indrindra, ka atao toy ny mahazatra izany araka izay azo atao. Ankehitriny, toy ny amin’ny maro hafa hazo fijaliana ara-kolontsaina ny olana, dia misy fianarana curve. Toy ny miresaka amin’ny olona, ny sms vehivavy Shinoa dia ho samy hafa avy amin’ny sms Tandrefana vehivavy ny ankamaroan ny fotoana. Andeha hojerentsika ny sasany torohevitra momba ny fomba ny mety ho andinin-teny Sinoa sipa sy tsy mikorontana ny zavatra: Raha Shinoa tovovavy saro-kenatra, ary milalao mafy-hahazo, dia matetika tsy hanao zavatra ho azy ny ray aman-dreny nampianatra azy ho mampiahiahy ny olona ny fikasana ary ny mpiambina ny tenany.
Ny Tandrefana vehivavy dia mety ho tsara aminareo fotsiny ny fanapahana ny hividy sy ny fahazoana avy hatrany ny firaisana ara-nofo eo amin’ny resaka raha toa ka tia anao, fa izany no fomba mahomby loatra be ho an’ny Shinoa tovovavy ary mety ho tsara kosa ny eny. Na raha toa ianao ihany no manomana amin’ny zavatra tsotra sy tsy te-hahazo ny fifandraisana matotra, Azia tovovavy mazàna ho shyer momba ny lohahevitra firaisana ara-nofo, ka vonjeo ny rehetra fa rehefa tena ianao amin’ny manokana ary tao amin’ny efitrano fandrian. Aza mitondra izany mazava ny soratra, ary tena tsy handefa sary na inona na inona eo ambany ny akanjo. Bebe kokoa, dia mety ho gaga fa izy no handà anao voalohany ianao rehefa mangataka azy avy. Izany no somary ara-dalàna noho ny fanabeazana, ka tsy mety ho ny nikapoka manodidina ny roimemy be kokoa ny mahazo ny aina aloha dia manaiky hihaona dia any ho any amin’ny olona.
Izany karazana mandreraka, fa ny ampahany amin’ny lalao ao Shina
Izany no antony koa dia manampy ny kendrena ankizivavy izay liana manokana amin’ny fiarahana vahiny mety hampidina ny»rindrina»kely fotsiny. Izany karazana sarotra ny hampita fihetseham-po sy ny anton-javatra hafa toy ny fikasany amin’ny alalan’ny teny. Na amin’ny olona, dia mety hahita Shinoa ny ankizivavy naka ny be dia be ny hatsikana maneso ara-bakiteny, noho izany dia mety manana fihetseham-po ny zavatra teo amin’ny sampan-draharaha ny tsy fifankahazoan-kevitra. Fomba iray hafa ny famantarana ny fikasany sy ny fihetseham-po dia mampiasa betsaka ny emojis. Ianao dia mety hahita fa izy dia ny fampiasana azy ireo ihany koa izy ireo, ny kely kokoa ny malaza amin’ny olona ao Azia noho ny amin’ny an’ireo any amin’ny tany Tandrefana, noho izany dia mandray ny sasany zatra, nefa izany dia mahatonga be dia be ny hoe mihevitra fa vitsy ny fomba hafa mba hampita lalàna manokana. Mazava ho azy, raha ny ankizivavy ianao no miresaka amin’ny tsy miteny ny hilelaka ny malagasy, ianao kokoa eny amin’ny fampiasana ny fototra Shinoa noho ny fandraisana ny fahafahana eo ny fahafahana hamantatra ny zavatra nolazainy, na ny ratsy kokoa, mampiasa fandikan-teny rindrambaiko. Na izany aza, raha ny ankizivavy miteny malagasy, fa ny Shinoa dia tsy tena tsara, vao mandeha mialoha sy ny lahatsoratra amin’ny teny anglisy. Ny mety tsy fifankahazoan-kevitra fotsiny avo loatra raha toa ianao dia samy tsy mahafehy tsara ny teny, ary koa ny vaovao any amin’ny kolontsaina. Indray mandeha isan-tokan-tena ratsy ny tsy fahazoan-kevitra no nitranga, ianao angamba efa very ny vintana ny zazavavy, na dia izy taty aoriana dia tonga saina fa natao mba milaza zavatra hafa ny fahatsapana hafahafa dia mihoatra noho ny azo inoana fa voaozona ny hiaina anaty krizy eo aminao. Izany ihany koa no fotoana tsara milaza fa raha tsy mahay tsara, hahazo mahay tsara. Ny olona toy ny miresaka momba ny fomba»mafy»amin’ny teny Aziatika ireo, fa ny marina dia tsy ry zareo mafy, ry zareo fotsiny ny tena samy hafa amin’ny fiteny Tandrefana. Raha manatona Shinoa amin’ny saina tsy miangatra, ny fomba ny ankizy no izy rehefa ny fianarana ny teny voalohany, ianao manana fotoana mora kokoa izany noho ny hoe ianao no hitondra ny rehetra ny kolontsaina entana avy amin’ny fiteniny. Mitovy amin’izay voalaza etsy ambony, miezaka ny handeha ho an’ny mazava saina ianao, rehefa any amin’ny toerana samy hafa kolontsaina. Raha toa ianao te-hanontany azy avy ny dite ary mahatsapa fa izy dia vonona ny hiteny hoe eny, mifalihavanja ny an-kolaka momba ary hilaza aminy amin’ny fomba tena ara-dalana. Maro ny Tandrefana no manana ny fakam-panahy mba ho»fetsy»izy ireo rehefa miresaka ny ankizivavy, fa tsy foana ny handika tsara.
Dia izany midika fa ianao manana ny fihetseham-po teo amin’ny»lalao»kely
Azo antoka fa, fa ny lalao, dia tsy maintsy ho samy hafa rehefa mifandray amin’ny Sinoa ny tovovavy ihany. Miezaka ny ho mazava kokoa sy manao ny marina mikasika ny zavatra izay lazainao izany no zavatra iray izay ny ankamaroan’ny Shinoa vavy dia mankasitraka. Indrindra fa raha izay tadiavinao dia tsy lehibe, tsy mandeha ho azy izy raha miaraka amin’ny namany, ary ataovy mazava ny fandrosoana ianao dia ho voatifitra teo. Izany no karazana ny hatsaran-tarehy ny lahatsoratra tao fa mamela anao hifandray aminy tamim-pahendrena ary tsy nisy olona mba hahafantatra ny zavatra ianao ny mba. Be dia be ireo tovovavy Shinoa nahasarika vahiny ny olona, fa toy ny ankamaroan’ny ankizivavy no hihaona ao amin’ny kolontsaina misy, dia raiki-tahotra ny hiseho toy ny»mahamenatra ny vehivavy»manoloana ny faribolana ara-tsosialy. Tsy afaka hanao izany amin’ny alalan’ny fotsiny mamela azy mba hitandrina ny fifandraisana zava-miafina raha tiany. Ireo dia vitsivitsy monja soso-kevitra amin’ny fahazoana nanomboka ny hafatra sy ny sms amin’ny ankizivavy ianao mampiaraka na liana amin’ny. Mazava ho azy, ny hany fomba ianao dia afaka mahazo ny tena tsara ny lalao sms amin’ny Sinoa vavy amin’ny alalan’ny zavatra niainana sy ny fomba fanao. Noho izany, download WeChat na ny iray fandefasan-kafatra sy mahazo miasa
← Maimaim-poana Lahatsary Firesahana amin'ny Finday
Chatroulette Shina →